Event or Special Offer Period: 16 - 17 Feb 2019
nissan terra launching 16 - 17 Feb Myanmar Plaza
Nissan Terra launching event will be held at Myanmar Plaza on 16 Feb 2019. Opening ceremony at 11 am 16 Feb 2019. The whole event is Feb 16 at9AM – Feb 17 at9PM.
အောက်ပါအတိုင်း တက်ရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။ NISSAN TERRA ကားအသစ် Launching ပွဲ အခမ်းအနား နေ့ရက် : ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖဖော်ဝါရီလ ၁၆ရက်နေ့ အချိန် : နေ့လည် ၁၁ နာရီ နေရာ : မြန်မာပလာဇာ၊ ရန်ကုန် (အထူးဧည့်သည်အဆိုတော် : နင်ဇီမေ) ခုချိန်မှာတော့ ကားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အများကြီး မဖော်ပြပေးတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ခံစားနိုင်ဖို့ အားလုံးကို ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ယခုလာမဲ့ စနေနေ့မှာ မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အတူလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ၁၆ရက်နေ့ကျရင်အားလုံးကို တွေ့ဖို့ စောင့်ကြိုနေပါမယ်
အောကျပါအတိုငျး တကျရောကျပါရနျ ဖိတျကွားအပျပါတယျ။ NISSAN TERRA ကားအသဈ Launching ပှဲ အခမျးအနား နရေ့ကျ : ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဖဖျောဝါရီလ ၁၆ရကျနေ့ အခြိနျ : နလေ့ညျ ၁၁ နာရီ နရော : မွနျမာပလာဇာ၊ ရနျကုနျ (အထူးဧညျ့သညျအဆိုတျော : နငျဇီမေ) ခုခြိနျမှာတော့ ကားနဲ့ ပတျသတျပွီး အမြားကွီး မဖျောပွပေးတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယျတိုငျလာရောကျခံစားနိုငျဖို့ အားလုံးကို ဖိတျကွားလိုကျပါတယျ။ ယခုလာမဲ့ စနနေမှေ့ာ မိသားစုတှေ သူငယျခငျြးတှေ နဲ့ အတူလာရောကျဖို့ဖိတျကွားလိုကျပါတယျ။ ၁၆ရကျနကေ့ရြငျအားလုံးကို တှဖေို့ စောငျ့ကွိုနပေါမယျ
new nissan terra car launching 16 - 17 Feb Myanmar Plaza